Safarka Aswan Xalaal eHalal Safarka Martida oo leh Hagaha Safarka, Hoteelada Xalaal & Safarada
Aswan waa tan ugu yar saddexda magaalo ee waaweyn ee dalxiiska webiga Niil. Ahaanshaha koonfurta ugu fog saddexda, waxay leedahay dad aad u tiro badan oo reer Nubia ah, inta badan dib udajin laga sameeyay dalkooda hooyo aagga uu ku fatahay Harada Nasser. Aswan waa guriga ay ku yaalaan dhagxaanta dhagxaanta badan oo laga soo saaray inta badan alwaaxdii lagu arkay Luxor. Aswan wuxuu ahaa marinkii hore ee Masaaridu u mari jireen Afrika.
Sidoo kale, Aswan waa beddelka dhib-la'aanta ah ee Luxor oo leh si siman ama xitaa ka sii qurux badan Niil, aragtiyo badan oo cajiib ah oo dhow iyo souq aad uga run badan kan yar ee ku yaal Luxor.
Diyaarad ugu raac Aswan
Madaarka Caalamiga ah ee Aswan (25 km SSW ee magaalada, daanta galbeed iyo koonfurta biyo xireenka sare). Basaska dadweynaha ma aadaan garoonka diyaaradaha amaanka wadada aada garoonka ayaa aad loo adkeeyay, sidaa darteed waa macquul macquul inaad taksi qaadato, taas oo ay tahay inaad horay ugu heshiiso qiimaha. Lacagta laga raaco garoonka diyaaradaha ilaa saldhigga tareenka (oo lagu sheegay gudaha garoonka diyaaradaha) waa LE92 (Nofeembar 2018). Duulimaadyada soo socda ayaa ka shaqeeya adeegyada garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aswan: Astraeus (oo ka yimid London Gatwick), EgyptAir (oo ka yimid Abu Simbel, Qaahira, Luxor), iyo LotusAir (oo ka yimid Qaahira). (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tareen ku aado Aswan
Wadada Tareenka Wadada
Saldhigga Tareenka Aswan (dhammaadka woqooyi ee Xarunta Magaalada, dhawr boqol oo mitir gudaha u jirta webiga). Waqti badan ka tag haddii aad u baahan tahay inaad iibsato tigidhada, maadaama adeegga miiska korontadu uu yahay mid gaabis ah. Waxay kaloo leedahay macluumaad dalxiis gudaha ah. Basaska yaryar waxay ka baxaan saldhigga dibaddiisa (midig u leexo markaad ka baxdo terminaalka), waxaana jira dhowr makhaayado iyo huteelo asaasi ah oo ku yaal meelaha u dhexeeya saldhigga iyo webiga. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Aswan waa dhamaadka koonfureed ee shabakada tareenka Masar. Khadku wuxuu raacaa wabiga woqooyi ilaa Luxor (3-4 saac), Qaahira (saacad kale 10) iyo Alexandria (2 saac kale). Tareenku waa hab fiican oo loogu safro inta u dhexeysa Aswan iyo Luxor maadaama ay aad u gaaban tahay in la duulo, basaskuna ay yihiin kuwo kacsan oo aan gebi ahaanba ammaan ahayn; qiimayaasha waa LE50-100 AC1, kala bar AC2. Tareenka ka raaca Qaahira ayaa sida muuqata aad uga gaabiya duulimaadka, laakiin waa mid raaxo leh oo amaan ah, oo si layaablehna u jaban.
Maalintii ayaa muujisa waxay leeyihiin tababarayaal hawo qaboojiyeyaal ah oo kala ah AC1 iyo AC2 oo leh kuraas diyaaradeed oo raaxo leh. Waxay yihiin hab raaxo leh oo ay dib ugu fadhiistaan ​​una eegaan muuqaalka dhirta badan ee dooxada Niilka. Qiimaha tareenka ayaa ku kala duwan tareenka, iyadoo hal tigidh Qaahira-Aswan ay ku kacayso LE1 illaa LE2 oo ku taal AC140 (Febraayo 250), iyo in ku dhow 1-2018% ka yar AC30. Cabitaannada fudud iyo kuwa fudud ayaa la siiyaa, waxaana jiri kara gaari cunto, laakiin sida ugu fiican horay u sii iibso cuntada iyo cabitaanka ka hor.
Hurdada Deluxe waxaa maamula shirkad gaar loo leeyahay, Watania. Kuwani waxay leeyihiin gawaari casri ah oo hawo-qaboojiyeyaal ah, oo leh xulashooyinka 1 iyo 2-berth iyo baabuur naadi / qol. Cunto fiidkii iyo quraac ayaa lagu raacinayaa qiimaha rakaabka. Qiimaha hal wado u dhexeeya Qaahira iyo Aswan waa US $ 110 halkii mar, ama US $ 80 oo wadaaga qol 2-berth ah (Feb 2018). Hal hurdo ayaa soconaya habeenki sanadka oo dhan, dhanka koonfurta wuxuu ka yimaadaa Qaahira Ramses agagaarka 8PM, woqooyi wuxuu uga socdaa Aswan agagaarka 7PM. Hurdada dheeriga ahi waxay shaqeeyaan xilliyada mashquulka laakiin tareenadan ayaa laga yaabaa inay ka bilaabaan Giza halkii ay ka tagi lahaayeen xarunta Qaahira Ramses.
Tareennada maxalliga ah - Tababarro aan ahayn a / c ayaa tababbara alwaax u dhexeeya Qaahira, Luxor iyo Aswan, maalin iyo habeenba, istaaga saldhigyada badankood. Kuwani wax badan kama gaabin, laakiin si aad ah ayey u jaban yihiin.
Xawaaraha waxaa maamula Tareennada Qaranka ee Masaarida (ENR) - hubi jadwalka iyo qiimaha, oo samee ballansasho, iyaga oo toos ah (laakiin hubi inaad sidaas sameyso 24 hr kahor ama nidaamku uusan aqbali doonin!). ENR sidoo kale waxay maamushaa tareenada caadiga ah laakiin kuwani ma ahan kuwo la xajin karo oo aan lagu soo bandhigin jadwalka, tikidhadaada ka iibso saldhigga. Kuwa hurdada ku raaxeysanaya waa in khadka tooska ah looga dalbado Watania.
Tigidhada tooska ah sidoo kale waa laga iibsan karaa saldhigga laakiin 2017/18, xarunta Qaahira Ramses ayaa inta badan diiday inay ka iibiso tikidhada maalinlaha ah dalxiisayaasha, iyagoo ku andacoonaya in kaliya loo ogol yahay tareenka habeenkii. Tani waa bunkum mana jiraan dhibaatooyin la mid ah oo tikidhada noocaas ah laga iibsado Giza, ama woqooyi u socda Aswan ilaa Qaahira - ama xitaa si fudud loo raaco tareenka maalintii iyada oo aan la helin tigidh.
Basaska Hurghada waxay ka baxaan LE100-150 8-12 saac oo safar ah (513 km), basasku waxay ka baxaan Aswan 3:30 PM iyo 5:30 PM, wadada ay maamusho Upper Egypt Bus Co. Tigidhada waxaa lagu iibiyaa baska, laakiin hubi inaad weydiiso qiimaha xafiiska tikidhada, maxaa yeelay tikidhada baska ku iibiyo badanaa waxay kor u qaadi doontaa qiimaha LE5 ama wax ka badan oo jeebka ku shubtaa haddii aad ajnabi tahay.
Ku safri doonta Aswan
Maraakiibta Cruise-ka waxay maraan inta u dhaxeysa Aswan iyo Luxor maalmaha badankood. Kuwani waa dalxiisyo dalxiis oo qaali ah oo qaata 5 maalmood ama in ka badan oo qiimo jaban ah, maahan doomo. Hawl wadeeno kala duwan, wax kaga iibso khadka tooska ah taariikhaha iyo qiimaha
Dooni rakaab ah oo ay maamusho Hay'adda Gaadiidka Dooxada Webiga Niil ayaa u gudubta harada Nasser Wadi Halfa ee Suudaan toddobaadkii hal mar. Southbound waxay ka tagtaa Aswan duhurkii Axada si ay u timaado maalinimada Isniinta; woqooyi waxay ka tagtaa Wadi Halfa 5PM Isniinta si ay u gaarto Aswan duhurkii Talaadada. Tigidhada fasalka koowaad, oo kaa hela meel qol la wadaago ah, ayaa ku kacaya LE385; Fasalka 2aad wuxuu kursi kaaga helayaa sagxadda LE230. Waxaad ubaahan doontaa in fiisadaada Suudaan horay loo sii kala saaro. Laga soo bilaabo Wadi Halfa, basaska iyo tareen aad u mararka qaarkood ayaa aada koonfurta ilaa Khartoum.
Aswan waa iswaafajin ku filan oo uu gorgortan ugu horrayn lug ku socdo.
Muuqaalka indhaha ee jasiiradaha webiga ama Daanta Galbeed, waa inaad ka gudubtaa webiga adoo wata mooto doon ama felluca. U hubso inaad fiiro gaar ah u yeelatid sicirka maaddaama wadayaashu ay isku dayayaan inay siyaadiyaan dalxiisayaasha Doomaha dadweynaha ee u socda Jasiiradda Elephantine waa LE5 ajaanibta (LE1 ee Masriyiinta, Nofeembar 2018). Doomaha loo raaco Daanta Galbeed ayaa sidoo kale LE5 u leh ajaanibta iyo LE1 dadka deegaanka ah. Safarada Felluca waxay kugu kici doonaan LE50-80 waxay kuxirantahay hadba gurigaaga (Nofeembar 2018).
Wixii Philae ah, Biyo-xireenka Sare, iyo waxyaabaha udambeeya ee aan dhameystirnayn, waxaad u raaci kartaa taksi ama gaari faras lagu jiido.
Dalxiiska Dalxiiska Jasiiradda Pyramisa Iswan
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Safarka Aswan Xalaal